မိုနာလီဇာ ပန်ချီကားရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်များ - Thutazone
မိုနာလီဇာ ပန်ချီကားရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်များ
By ThutammPosted on November 17, 2018
မူရင်းရေးသားသူ – Dr.Aung
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ခန့်က လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီသည် ပန်ချီကားတစ်ချပ်ကို ဖန်တီးရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ထိုပန်ချီကားသည် Oil on poplar အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ ကိုယ်တစ်ပိုင်းပုံကို ရေးခြယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုပန်ချီကားသည် ယခုလက်ရှိအချိန်တွင်မူ ကမ္ဘာ့လူသိအများဆုံး, လည်ပတ်ကြည့်ရှုခံရဆုံး, စာပေကဗျာများတွင် ထည့်အသွင်းခံရဆုံး, သီချင်းရေးစပ်သူများ အသုံးအပြုဆုံးနှင့် ပြန်လည်တုပရေးဆွဲခြင်း ခံရဆုံးသော ပန်ချီကားချပ်အဖြစ် တည်ရှိနေခဲ့တာပါ။ ထိုအရာကတော့ ပြင်သစ်များက La Joconde (သို့) အီတာလီလူမျိုး များက La Gioconda လို့သိထားကြပြီး အများစုကတော့ ‘Mona Lisa’ ဆိုပြီး သိထားကြသော ပန်ချီကားချပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီသည် Mona Lisa ပန်ချီကားကို အီတလီနိုင်ငံ ဖလောရင့်စ်မြို့တွင် ၁၅၀၃ နှင့် ၁၅၀၆ ခုနှစ်ကြားမှာ စတင်ရေးဆွဲခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး ၁၄ နှစ်အကြာ ၁၅၁၇ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်း ပြင်သစ်နိုင်ငံပြောင်းရွေ့အပြီးမှ လက်စသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဗင်ချီက ထိုပန်ချီကားကို ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလောက်အချိန်ကြာအောင် ရေးဆွဲခဲ့ရတာလဲ ? တွေးတောစရာတွေ အများကြီးရှိနေခဲ့တာပါ။
ဒါဗင်ချီဟာ Cipher လုပ်ရာမှာ အလွန်ဝါသနာထုံသူတစ်ယောက်ပါ။ သူ့ရဲ့ စာတမ်းတော်တော်များများကိုလည်း ‘mirror writing’ ခေါ် လျို့ဝှက်စာရေးနည်းနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ထားလေ့ရှိပြီး Cryptex လို့ခေါ်တဲ့ လျို့ဝှက်စာထည့်သွင်းထားတဲ့ စက်တစ်မျိုးကိုလည်း ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ လူအများစုက ယုံကြည်ခဲ့ကြတာပါ။ အလွန်ထက်မြက်ပြီး လျို့ဝှက်တတ်သူအဖြစ် သူ့ခေတ်သူ့အခါက သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်ထိလည်း သူ့လိုပညာရှင်မျိုး ထပ်မံပေါ်ထွက်မလာသေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင် လက်ရှိအချိန်အထိ ပဟေဠိများစွာကျန်ရှိနေခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် ‘နောက်ဆုံးညစာ’ ပန်ချီကားကိုလည်း လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီကပဲ ဖန်တီးခဲ့တာပါ။
ဒီတော့ ဒါဗင်ချီ ၁၄ နှစ်ကြာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ Mona Lisa ပန်ချီကားချပ်ကြီးထဲမှာ ဘယ်လိုလျို့ဝှက်ချက်တွေရှိနေမလဲဆိုတာ ဆက်လက်လေ့လာကြည့်ရအောင်လားဗျာ။
လေ့လာသူတွေအများစုတွေးထင်ထားသလို ဒီပန်ချီကားဟာ မျက်စိလှည့်စားမှုတစ်ခုလေလားလို့ တွေးထင်စရာပါ။ ဒီပန်ချီကားထဲမှာ ပန်ချီကားနောက်တစ်ခု ရှိနေတယ်လို့ ပညာရှင်တွေက ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အချို့ပညာရှင်တွေကတော့ Mona Lisa ရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲမှာ Cipher လုပ်ထားတဲ့ နံပါတ်တွေအများကြီးပါတယ်လို့ တထစ်ချယုံကြည်နေကြပြီး ထိုနံပါတ်တွေကပဲ ဒါဗင်ချီလျို့ဝှက်ထားတဲ့ နေရာတစ်ခုခုကို ညွှန်းဆိုပြသနိုင်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။ ဒါဆို လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီက ဒီပန်ချီကားထဲမှာ ဘာကိုလျို့ဝှက်ဖော်ပြခဲ့တာလဲ???
အချို့ကလည်း ဒီကားချပ်ရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်ဟာ မိုနာလီဇာရဲ့ အပြုံးထဲမှာရှိတယ်လို့ ပြောဆိုကြပြန်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပန်ချီကားထဲရှိ သူမ၏ အပြုံးသည် တစ်ခါတစ်ရံ ပျော်ရွှင်စွာပြုံးနေတတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင်မူ အနည်းငယ်ဝမ်းနည်းနေသယောင် ဖြစ်နေသည်ဟု လေ့လာသူများက တွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဘာလိုအကြောင်းကြောင့် သက်မဲ့ပန်ချီကားချပ်တစ်ချပ်က ပျော်ရွှင်မှု ဝမ်းနည်းမှုကို ဖော်ပြနိုင်မှာလဲ? ဒါကလည်း ပန်ချီကားကြည့်ရှု သူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စိတ်အခြေအနေပေါ် မူတည်နေသလို ပန်ချီကားကို ရပ်ကြည့်တဲ့တည်နေရာ အနေအထားအလိုက် ပြောင်းလဲတတ်ကြောင်း ပညာရှင်တွေက ဖြေရှင်းခဲ့ကြပါတယ်။
လေ့လာသူ အချို့ကလည်း ပန်ချီကားချပ်ထဲက လူသည် အများသူငါတွေ့မြင်သလို အမျိုးသမီးမဟုတ်ပဲ လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီရဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြပြန်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဒါဗင်ချီ၏ ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူထဲမှ မျက်နှာတစ်ခြမ်းကို ဖြတ်ယူ၍ Mona Lisa ၏ မျက်နှာတစ်ခြမ်းတွင် ထပ်လိုက်ပါက ထပ်တူညီသော မျက်နှာတစ်ခုထွက်လာသည်ကို တွေ့ရခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ပေသည်။
သို့သော် ထိုအခြင်းကလည်း ပုံရေးဆွဲသူတစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း၏ ရေးဆွဲနည်းရေးဆွဲဟန်ဖြစ်နေခြင်း ကြောင့်လောဟု တွေးတောနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စိတ်အာရုံလှည့်စားမှုများကို မေ့ဖျောက်ထားပြီး မိုနာလီဇာပန်ချီကားချပ်မှ လက်တွေ့ကျသော အခြေခံအချက်များကို ဆက်လက် Decypher လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။…….
Mona Lisa ကားချပ်မှ လျို့ဝှက်ချက်နှင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ!!!
နံပါတ် ၁ – မိုနာလီဇာသည် ပန်ချီအဆွဲခံနေစဉ် ကိုယ်လေးလက်ဝန် ရှိနေသလော?
လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင်မှ စတင်လက်ခံလာကြသော လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ မိုနာလီဇာ၏ အမည်ရင်းမှာ ‘Lisa Gherardini’ ဖြစ်ပြီး ဖလောရင့်စ်မှ လူကြီးမင်းတစ်ဦး၏ ဇနီးသည်ဟု သိရှိရပါသည်။ ပုံတွင် မိုနာလီဇာသည် အနည်းငယ်မို့မောက်နေသော ဝမ်းဗိုက်အပေါ် လက် ၂ ဖက်ကိုယှက်လျက်တင်ထားခြင်းက ကိုယ်ဝန်ရှိနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ကနေဒါမှ ပညာရှင်များက ကားချပ်ကို လေဆာဖြတ်စေ၍ မိုနာလီဇာကို 3D ရုပ်လုံးပေါ်စေခဲ့ရာတွင် ဦးခေါင်းနှင့် ပုခုံးအနားမှ အလွန်ပါးလွှာသော ခေါင်းစွပ်ပုဝါအစကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုအရာသည် ၁၆ ရာစုတစ်ဝိုက် အီတလီတွင် မီးဖွားခါနီးအမျိုးသမီးများသာ ဝတ်ဆင်လေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသည့် အချက်ကလည်း ပထမအချက်ကို ထောက်ခံပေးသယောင် ရှိနေခဲ့ပါသည်။
နံပါတ် ၂ – သူမသည် မိန်းမပျက်မဟုတ်ကြောင်း ထောက်ခံပေးနိုင်ခြင်း။
ပညာရှင်များသည် သူမအား မည်သူမည်ဝါမှန်း အတိအကျ မသိရှိခင်အချိန်များက မိုနာလီဇာသည် ဒါဗင်ချီ၏ မိခင်ဟုလည်းကောင်း, ဒါဗင်ချီ ကိုယ်တိုင်၏ ပုံတူဖြစ်သည်ဟု တစ်ဖုံ, မိန်းမပျက်တစ်ယောက်ပုံ သာဖြစ်သည်ဟုတစ်မျိုး မျိုးစုံကောက်ချက်ချကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၁၆ ရာစုအတွင်းက အီတလီမှ မိန်းမရွှင်များသည် ပန်ချီကားချပ်ထဲမှ မိုနာလီဇာကဲ့သို့ မျက်နှာတွင် အမွှေးအမျင်လုံးဝမရှိပဲ ဆံပင်ကိုလည်း လုံးဝမစည်းနှောင်ပဲ ချထားလေ့ရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အနီအောက်ရောင်ခြည်လေ့လာချက်များမှ သူမ၏ဆံပင်ကို နောက်တွဲဆံထုံးဖြင့် စည်းနှောင်ထားကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်သောကြောင့် ထိုစွပ်စွဲချက်ကိုလည်း ပယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
နံပါတ် ၃ – ချမ်းသာကြွယ်ဝသော မိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု သိရှိနိုင်ခြင်း။
အီတလီမှ ပညာရှင်များ၏ လေ့လာချက်အရ သူမ၏ အနက်နဲဆုံး လျို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သော အပြုံးသည် ထိုခေတ်ထိုအခါက ပန်ချီကားချပ်များဖြစ်သော ဟင်နရီ ၈ ကဲ့သို့သော ချမ်းသာကြွယ်ဝ အာဏာရှိသူများသည် အဆီအစိမ့်များစားသောက် ယစ်မှုးပြီး သွေးတွင်းကိုလက်စရော မြင့်တက်ချိန်တွင် ပုံတူအဆွဲခံရာ၌ ပြုလေ့ရှိသော အပြုံးမျိုးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူမသည် ကြွယ်ဝချမ်းသာကြောင်း ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ပြန်ပါသည်။
နံပါတ် ၄ – မျက်ခုံး မျက်တောင်များ ရှိခဲ့သည်ဟု သက်သေပြနိုင်ခြင်း။
ပြင်သစ်ပညာရှင် ပါစကယ်၏ လေ့လာသက်သေပြချက်အရ မိုနာလီဇာ၏ မျက်ခုံးမျက်တောင်များသည် ဒါဗင်ချီရေးသားခဲ့စဉ်ကတည်းက မပါဝင်ခဲ့သည်မဟုတ်ပဲ အကြိမ်ကြိမ်သန့်စင်မှုနှင့် နှစ်ကြာညောင်းမှုတို့ကြောင့် မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကင်မရာဖြင့် သူမ၏မျက်နှာကို ၂၄ ဆခန့်ချဲ့ပြီး ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
နံပါတ် ၅ – ရွှေအချိုး ဗိသုကာပညာ အယူအဆကို အသုံးပြုရေးဆွဲထားခြင်း။
လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီသည် သင်္ချာနည်းအရ ပန်ချီကားတစ်ချပ်လုံးကို တိုင်းတာအချိုးချ ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး မျက်နှာဟန်အနေအထားသည် ရွှေအချိုးအတိုင်းရှိနေခြင်းက ပန်ချီကားရှုသူကို မျက်စိမလွှဲစေအောင် ဖမ်းစားထားသော အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။
နံပါတ် ၆ – မိုနာလီဇာ ပြုံးနေသလား? မဲ့နေသလား?
မိုနာလီဇာ ပြုံးနေလား မဲ့နေလားဆိုတဲ့ အငြင်းပွားမှုဟာ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ နီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ။ ကြည့်ရှုသူရဲ့ စိတ်အခြေအနေ တည်နေရာတွေအလိုက် ပြောင်းလဲတယ်လို့ ပြောခဲ့ကြပေမယ့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ဒက်ခ်ျလူမျိုး လေ့လာသူတစ်ဦးက ‘Emotion Recognition’ ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုပြီး မိုနာလီဇာရဲ့ စိတ်အခြေအနေ အတိအကျကို ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အဲ့ဒါတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ် ;
smile, 83% ၊ happy, 9%
disgusted, 6% ၊ fearful, 2%
angry, less than 1% neutral, and
နံပါတ် ၇ – မျက်လုံးထဲမှ Cipher များ။
သာမာန်မျက်လုံးများဖြင့် မမြင်တွေ့နိုင်သော်လည်း အဆပေါင်းများစွာချဲ့၍ ကြည့်ရှုပါက မိုနာလီဇာ၏ မျက်လုံးထဲတွင် လျို့ဝှက်နံပါတ် (သို့) စာလုံးများကို တွေ့မြင်ရမည် ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ညာဘက်မျက်လုံးထဲတွင် ‘LV’ ဟူသောစကားဝှက် နှင့် ဘယ်ဘက်တွင်မူ ‘CE သို့ B’ ဟူသော အမှတ်အသားကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ပန်ချီကားနောက်ခံဖြစ်သော တံတားလေး၏ အကွေးနားတွင်လည်း ’72’ ဟူသော စာလုံးများကို အံ့ဖွယ်တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအက္ခရာ စာလုံးများသည် မည်သည်ကို ရည်ညွှန်းမှန်း လက်ရှိအချိန်ထိ မဖော်ထုတ်နိုင်သေးသော်လည်း ထိုစာလုံးများကို ဒါဗင်ချီမှ နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော်ခန့် ကွယ်ဝှက်ပြထားသည်မှာ အံ့ဖွယ်ကောင်းလှပေသည်။
နံပါတ် ၈ – ပန်ချီကားချပ်ထဲမှ ပုန်းကွယ်နေသော သတ္တဝါများ။
မိုနာလီဇာ ပန်ချီကားသည် အမှန်တစ်ကယ် ပန်ချီကားချပ်ထဲမှ ပန်ချီကားဖြစ်ပါသည်။ ပန်ချီကားချပ်ကို ဘေးဘယ်ညာ အထက်အောက်လှန်ကြည့်ပါက ခြင်္သေ့, လူဝံ, ကျွဲ ခေါင်းနှင့် မြည်းပုတို့အား တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသတ္တဝါ လေးမျိုးစလုံးကွယ်ဝှက်ရေးဆွဲထားပုံကို ဒါဗင်ချီ၏ ‘The Last Supper’ တွင်လည်းတွေ့ရသောကြောင့် လေ့လာသူများအတွက် တွေးတောစရာများစွာ ပေါ်ပေါက်လာစေပါသည်။ ထို့အပြင် မိုနာလီဇာပန်ချီကားကို ဘယ်ဘက်ခပ်စောင်းစောင်း အနေအထားမှကြည့်ပါက သူမရင်ဘတ်နားတွင် မိချောင်းပါးစပ်ပုံကိုလည်း တွေ့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးခြားဆုံးအနေဖြင့် ထိုအနေအထားတွင် သူမ၏မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပါက အဖြေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ရန် အလွန်နီးကပ်နေသည့်အတွက် အားပေးသည့်အလား အစွမ်းကုန်ပြုံးပြနေသော မိုနာလီဇာအား တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း…….
အချုပ်အားဖြင့် Louvre Museum ထဲက Mona Lisa နှင့် The Last Supper ပန်ချီကားကြားမှာ ဘယ်လိုဆက်စပ်မှုတွေရှိနေတာလဲ?
သူမ မျက်လုံးထဲက နံပါတ်တွေ စာလုံးတွေဟာ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဆောင်နေ သလဲ?
ပန်ချီကားထဲက ပန်ချီတွေဖြစ်တဲ့ နောက်ခံရှုမျော်ခင်း တည်နေရာတွေနဲ့ သတ္တဝါတွေကကော ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ထည့်သွင်းရေးဆွဲခဲ့တာလဲ?
ဆိုတာတွေကတော့ နောက်နှစ်ရာပေါင်းများစွာအထိ ပဟေဠိတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပြီး Leonardo di ser Piero da Vinci မှလွဲ၍ နောင်လာနောက်သားများအတွက် မဖြေရှင်းနိုင်သော Da Vinci Code တစ်ခုအနေနဲ့ ဆက်လက်ကျန်ရှိနေဦးမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း…….
Translated by Dr.Aung
မိုနာလီဇာ ပနျခြီကားရဲ့ လြို့ဝှကျခကျြမြား (unicode)
မူရငျးရေးသားသူ – Dr.Aung
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၅၀၀ ကြျောခနျ့က လီယိုနာဒို ဒါဗငျခြီသညျ ပနျခြီကားတဈခပျြကို ဖနျတီးရေးဆှဲခဲ့ပါသညျ။ ထိုပနျခြီကားသညျ Oil on poplar အမြိုးအစားဖွဈပွီး အမြိုးသမီးတဈယောကျ၏ ကိုယျတဈပိုငျးပုံကို ရေးခွယျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ထိုပနျခြီကားသညျ ယခုလကျရှိအခြိနျတှငျမူ ကမ္ဘာ့လူသိအမြားဆုံး, လညျပတျကွညျ့ရှုခံရဆုံး, စာပကေဗြာမြားတှငျ ထညျ့အသှငျးခံရဆုံး, သီခငျြးရေးစပျသူမြား အသုံးအပွုဆုံးနှငျ့ ပွနျလညျတုပရေးဆှဲခွငျး ခံရဆုံးသော ပနျခြီကားခပျြအဖွဈ တညျရှိနခေဲ့တာပါ။ ထိုအရာကတော့ ပွငျသဈမြားက La Joconde (သို့) အီတာလီလူမြိုး မြားက La Gioconda လို့သိထားကွပွီး အမြားစုကတော့ ‘Mona Lisa’ ဆိုပွီး သိထားကွသော ပနျခြီကားခပျြပဲဖွဈပါတယျ။
လီယိုနာဒို ဒါဗငျခြီသညျ Mona Lisa ပနျခြီကားကို အီတလီနိုငျငံ ဖလောရငျ့ဈမွို့တှငျ ၁၅၀၃ နှငျ့ ၁၅၀၆ ခုနှဈကွားမှာ စတငျရေးဆှဲခဲ့တယျလို့ ခနျ့မှနျးရပွီး ၁၄ နှဈအကွာ ၁၅၁၇ ခုနှဈနှောငျးပိုငျး ပွငျသဈနိုငျငံပွောငျးရှအေ့ပွီးမှ လကျစသတျနိုငျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါဗငျခြီက ထိုပနျခြီကားကို ဘာကွောငျ့အဲ့ဒီလောကျအခြိနျကွာအောငျ ရေးဆှဲခဲ့ရတာလဲ ? တှေးတောစရာတှေ အမြားကွီးရှိနခေဲ့တာပါ။
ဒါဗငျခြီဟာ Cipher လုပျရာမှာ အလှနျဝါသနာထုံသူတဈယောကျပါ။ သူ့ရဲ့ စာတမျးတျောတျောမြားမြားကိုလညျး ‘mirror writing’ ချေါ လြို့ဝှကျစာရေးနညျးနဲ့ မှတျတမျးတငျထားလရှေိ့ပွီး Cryptex လို့ချေါတဲ့ လြို့ဝှကျစာထညျ့သှငျးထားတဲ့ စကျတဈမြိုးကိုလညျး ဖနျတီးခဲ့တယျလို့ လူအမြားစုက ယုံကွညျခဲ့ကွတာပါ။ အလှနျထကျမွကျပွီး လြို့ဝှကျတတျသူအဖွဈ သူ့ခတျေသူ့အခါက သတျမှတျခံခဲ့ရသူတဈယောကျဖွဈပွီး လကျရှိအခြိနျထိလညျး သူ့လိုပညာရှငျမြိုး ထပျမံပျေါထှကျမလာသေးပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ လကျရှိအခြိနျအထိ ပဟဠေိမြားစှာကနျြရှိနခေဲ့တဲ့ သမိုငျးဝငျ ‘နောကျဆုံးညစာ’ ပနျခြီကားကိုလညျး လီယိုနာဒို ဒါဗငျခြီကပဲ ဖနျတီးခဲ့တာပါ။
ဒီတော့ ဒါဗငျခြီ ၁၄ နှဈကွာရေးဆှဲခဲ့တဲ့ Mona Lisa ပနျခြီကားခပျြကွီးထဲမှာ ဘယျလိုလြို့ဝှကျခကျြတှရှေိနမေလဲဆိုတာ ဆကျလကျလလေ့ာကွညျ့ရအောငျလားဗြာ။
လလေ့ာသူတှအေမြားစုတှေးထငျထားသလို ဒီပနျခြီကားဟာ မကျြစိလှညျ့စားမှုတဈခုလလေားလို့ တှေးထငျစရာပါ။ ဒီပနျခြီကားထဲမှာ ပနျခြီကားနောကျတဈခု ရှိနတေယျလို့ ပညာရှငျတှကေ ပွောဆိုနကွေပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခြို့ပညာရှငျတှကေတော့ Mona Lisa ရဲ့ မကျြလုံးတှထေဲမှာ Cipher လုပျထားတဲ့ နံပါတျတှအေမြားကွီးပါတယျလို့ တထဈခယြုံကွညျနကွေပွီး ထိုနံပါတျတှကေပဲ ဒါဗငျခြီလြို့ဝှကျထားတဲ့ နရောတဈခုခုကို ညှနျးဆိုပွသနိုငျမယျလို့ ပွောဆိုခဲ့ကွတာပါ။ ဒါဆို လီယိုနာဒို ဒါဗငျခြီက ဒီပနျခြီကားထဲမှာ ဘာကိုလြို့ဝှကျဖျောပွခဲ့တာလဲ???
အခြို့ကလညျး ဒီကားခပျြရဲ့ လြို့ဝှကျခကျြဟာ မိုနာလီဇာရဲ့ အပွုံးထဲမှာရှိတယျလို့ ပွောဆိုကွပွနျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ပနျခြီကားထဲရှိ သူမ၏ အပွုံးသညျ တဈခါတဈရံ ပြျောရှငျစှာပွုံးနတေတျပွီး တဈခါတဈရံတှငျမူ အနညျးငယျဝမျးနညျးနသေယောငျ ဖွဈနသေညျဟု လလေ့ာသူမြားက တှရှေိ့ခဲ့ကွပါတယျ။ ဘာလိုအကွောငျးကွောငျ့ သကျမဲ့ပနျခြီကားခပျြတဈခပျြက ပြျောရှငျမှု ဝမျးနညျးမှုကို ဖျောပွနိုငျမှာလဲ? ဒါကလညျး ပနျခြီကားကွညျ့ရှု သူတဈဦးခငျြးစီရဲ့ စိတျအခွအေနပေျေါ မူတညျနသေလို ပနျခြီကားကို ရပျကွညျ့တဲ့တညျနရော အနအေထားအလိုကျ ပွောငျးလဲတတျကွောငျး ပညာရှငျတှကေ ဖွရှေငျးခဲ့ကွပါတယျ။
လလေ့ာသူ အခြို့ကလညျး ပနျခြီကားခပျြထဲက လူသညျ အမြားသူငါတှမွေ့ငျသလို အမြိုးသမီးမဟုတျပဲ လီယိုနာဒို ဒါဗငျခြီရဲ့ ကိုယျတိုငျရေးပုံတူ ဖွဈသညျဟု ပွောကွပွနျသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ဒါဗငျခြီ၏ ကိုယျတိုငျရေးပုံတူထဲမှ မကျြနှာတဈခွမျးကို ဖွတျယူ၍ Mona Lisa ၏ မကျြနှာတဈခွမျးတှငျ ထပျလိုကျပါက ထပျတူညီသော မကျြနှာတဈခုထှကျလာသညျကို တှရေ့ခွငျးကွောငျ့ပငျ ဖွဈပသေညျ။
သို့သျော ထိုအခွငျးကလညျး ပုံရေးဆှဲသူတဈဦးတဈယောကျတညျး၏ ရေးဆှဲနညျးရေးဆှဲဟနျဖွဈနခွေငျး ကွောငျ့လောဟု တှေးတောနိုငျပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ စိတျအာရုံလှညျ့စားမှုမြားကို မဖြေ့ောကျထားပွီး မိုနာလီဇာပနျခြီကားခပျြမှ လကျတှကေ့သြော အခွခေံအခကျြမြားကို ဆကျလကျ Decypher လုပျကွညျ့ရအောငျဗြာ။…….
Mona Lisa ကားခပျြမှ လြို့ဝှကျခကျြနှငျ့ အငွငျးပှားဖှယျရာမြား!!!
နံပါတျ ၁ – မိုနာလီဇာသညျ ပနျခြီအဆှဲခံနစေဉျ ကိုယျလေးလကျဝနျ ရှိနသေလော?
လှနျခဲ့သော နှဈအနညျးငယျအတှငျးတှငျမှ စတငျလကျခံလာကွသော လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြအရ မိုနာလီဇာ၏ အမညျရငျးမှာ ‘Lisa Gherardini’ ဖွဈပွီး ဖလောရငျ့ဈမှ လူကွီးမငျးတဈဦး၏ ဇနီးသညျဟု သိရှိရပါသညျ။ ပုံတှငျ မိုနာလီဇာသညျ အနညျးငယျမို့မောကျနသေော ဝမျးဗိုကျအပျေါ လကျ ၂ ဖကျကိုယှကျလကျြတငျထားခွငျးက ကိုယျဝနျရှိနခွေငျးဖွဈသညျဟု ကောကျခကျြခနြိုငျပါသညျ။
ထို့အပွငျ ၂၀၀၆ ခုနှဈတှငျ ကနဒေါမှ ပညာရှငျမြားက ကားခပျြကို လဆောဖွတျစေ၍ မိုနာလီဇာကို 3D ရုပျလုံးပျေါစခေဲ့ရာတှငျ ဦးခေါငျးနှငျ့ ပုခုံးအနားမှ အလှနျပါးလှာသော ခေါငျးစှပျပုဝါအစကို တှရှေိ့ခဲ့ပါသညျ။ ထိုအရာသညျ ၁၆ ရာစုတဈဝိုကျ အီတလီတှငျ မီးဖှားခါနီးအမြိုးသမီးမြားသာ ဝတျဆငျလရှေိ့ကွောငျး တှရှေိ့ရသညျ့ အခကျြကလညျး ပထမအခကျြကို ထောကျခံပေးသယောငျ ရှိနခေဲ့ပါသညျ။
နံပါတျ ၂ – သူမသညျ မိနျးမပကျြမဟုတျကွောငျး ထောကျခံပေးနိုငျခွငျး။
ပညာရှငျမြားသညျ သူမအား မညျသူမညျဝါမှနျး အတိအကြ မသိရှိခငျအခြိနျမြားက မိုနာလီဇာသညျ ဒါဗငျခြီ၏ မိခငျဟုလညျးကောငျး, ဒါဗငျခြီ ကိုယျတိုငျ၏ ပုံတူဖွဈသညျဟု တဈဖုံ, မိနျးမပကျြတဈယောကျပုံ သာဖွဈသညျဟုတဈမြိုး မြိုးစုံကောကျခကျြခကြွပါသညျ။ အဘယျကွောငျ့ဆိုသျော ၁၆ ရာစုအတှငျးက အီတလီမှ မိနျးမရှငျမြားသညျ ပနျခြီကားခပျြထဲမှ မိုနာလီဇာကဲ့သို့ မကျြနှာတှငျ အမှေးအမငျြလုံးဝမရှိပဲ ဆံပငျကိုလညျး လုံးဝမစညျးနှောငျပဲ ခထြားလရှေိ့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။ သို့သျော အနီအောကျရောငျခွညျလလေ့ာခကျြမြားမှ သူမ၏ဆံပငျကို နောကျတှဲဆံထုံးဖွငျ့ စညျးနှောငျထားကွောငျး ကောကျခကျြခနြိုငျသောကွောငျ့ ထိုစှပျစှဲခကျြကိုလညျး ပယျထုတျနိုငျခဲ့ပွီဖွဈသညျ။
နံပါတျ ၃ – ခမျြးသာကွှယျဝသော မိသားစုမှ ဆငျးသကျလာသညျဟု သိရှိနိုငျခွငျး။
အီတလီမှ ပညာရှငျမြား၏ လလေ့ာခကျြအရ သူမ၏ အနကျနဲဆုံး လြို့ဝှကျခကျြဖွဈသော အပွုံးသညျ ထိုခတျေထိုအခါက ပနျခြီကားခပျြမြားဖွဈသော ဟငျနရီ ၈ ကဲ့သို့သော ခမျြးသာကွှယျဝ အာဏာရှိသူမြားသညျ အဆီအစိမျ့မြားစားသောကျ ယဈမှုးပွီး သှေးတှငျးကိုလကျစရော မွငျ့တကျခြိနျတှငျ ပုံတူအဆှဲခံရာ၌ ပွုလရှေိ့သော အပွုံးမြိုးဖွဈကွောငျး တှရှေိ့ခဲ့ရပါသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူမသညျ ကွှယျဝခမျြးသာကွောငျး ကောကျခကျြဆှဲနိုငျပွနျပါသညျ။
နံပါတျ ၄ – မကျြခုံး မကျြတောငျမြား ရှိခဲ့သညျဟု သကျသပွေနိုငျခွငျး။
ပွငျသဈပညာရှငျ ပါစကယျ၏ လလေ့ာသကျသပွေခကျြအရ မိုနာလီဇာ၏ မကျြခုံးမကျြတောငျမြားသညျ ဒါဗငျခြီရေးသားခဲ့စဉျကတညျးက မပါဝငျခဲ့သညျမဟုတျပဲ အကွိမျကွိမျသနျ့စငျမှုနှငျ့ နှဈကွာညောငျးမှုတို့ကွောငျ့ မှေးမှိနျပြောကျကှယျခဲ့ရခွငျး ဖွဈသညျဟု ကငျမရာဖွငျ့ သူမ၏မကျြနှာကို ၂၄ ဆခနျ့ခြဲ့ပွီး ဖျောထုတျနိုငျခဲ့ပါသညျ။
နံပါတျ ၅ – ရှအေခြိုး ဗိသုကာပညာ အယူအဆကို အသုံးပွုရေးဆှဲထားခွငျး။
လီယိုနာဒို ဒါဗငျခြီသညျ သင်ျခြာနညျးအရ ပနျခြီကားတဈခပျြလုံးကို တိုငျးတာအခြိုးခြ ရေးဆှဲထားခွငျးဖွဈပွီး မကျြနှာဟနျအနအေထားသညျ ရှအေခြိုးအတိုငျးရှိနခွေငျးက ပနျခြီကားရှုသူကို မကျြစိမလှဲစအေောငျ ဖမျးစားထားသော အဓိကအခကျြတဈခကျြဖွဈသညျဟု လလေ့ာတှရှေိ့ခဲ့ရပါသညျ။
နံပါတျ ၆ – မိုနာလီဇာ ပွုံးနသေလား? မဲ့နသေလား?
မိုနာလီဇာ ပွုံးနလေား မဲ့နလေားဆိုတဲ့ အငွငျးပှားမှုဟာ နှဈပေါငျး ၅၀၀ နီးပါးရှိခဲ့ပါပွီ။ ကွညျ့ရှုသူရဲ့ စိတျအခွအေနေ တညျနရောတှအေလိုကျ ပွောငျးလဲတယျလို့ ပွောခဲ့ကွပမေယျ့ ၂၀၀၅ ခုနှဈမှာ ဒကျချလြူမြိုး လလေ့ာသူတဈဦးက ‘Emotion Recognition’ ကှနျပွူတာဆော့ဖျဝဲကို အသုံးပွုပွီး မိုနာလီဇာရဲ့ စိတျအခွအေနေ အတိအကကြို ဖျောထုတျပေးနိုငျခဲ့ပါပွီ။ အဲ့ဒါတှကေတော့ အောကျပါအတိုငျးဖွဈပါတယျ ;
နံပါတျ ၇ – မကျြလုံးထဲမှ Cipher မြား။
သာမာနျမကျြလုံးမြားဖွငျ့ မမွငျတှနေို့ငျသျောလညျး အဆပေါငျးမြားစှာခြဲ့၍ ကွညျ့ရှုပါက မိုနာလီဇာ၏ မကျြလုံးထဲတှငျ လြို့ဝှကျနံပါတျ (သို့) စာလုံးမြားကို တှမွေ့ငျရမညျ ဖွဈသညျ။ သူမ၏ ညာဘကျမကျြလုံးထဲတှငျ ‘LV’ ဟူသောစကားဝှကျ နှငျ့ ဘယျဘကျတှငျမူ ‘CE သို့ B’ ဟူသော အမှတျအသားကို တှမွေ့ငျရမညျဖွဈသညျ။ ပနျခြီကားနောကျခံဖွဈသော တံတားလေး၏ အကှေးနားတှငျလညျး ’72’ ဟူသော စာလုံးမြားကို အံ့ဖှယျတှရေ့မညျဖွဈပါသညျ။ ထိုအက်ခရာ စာလုံးမြားသညျ မညျသညျကို ရညျညှနျးမှနျး လကျရှိအခြိနျထိ မဖျောထုတျနိုငျသေးသျောလညျး ထိုစာလုံးမြားကို ဒါဗငျခြီမှ နှဈပေါငျး ၅၀၀ ကြျောခနျ့ ကှယျဝှကျပွထားသညျမှာ အံ့ဖှယျကောငျးလှပသေညျ။
နံပါတျ ၈ – ပနျခြီကားခပျြထဲမှ ပုနျးကှယျနသေော သတ်တဝါမြား။
မိုနာလီဇာ ပနျခြီကားသညျ အမှနျတဈကယျ ပနျခြီကားခပျြထဲမှ ပနျခြီကားဖွဈပါသညျ။ ပနျခြီကားခပျြကို ဘေးဘယျညာ အထကျအောကျလှနျကွညျ့ပါက ခွင်ျသေ့, လူဝံ, ကြှဲ ခေါငျးနှငျ့ မွညျးပုတို့အား တှရေ့မညျဖွဈသညျ။ ထိုသတ်တဝါ လေးမြိုးစလုံးကှယျဝှကျရေးဆှဲထားပုံကို ဒါဗငျခြီ၏ ‘The Last Supper’ တှငျလညျးတှရေ့သောကွောငျ့ လလေ့ာသူမြားအတှကျ တှေးတောစရာမြားစှာ ပျေါပေါကျလာစပေါသညျ။ ထို့အပွငျ မိုနာလီဇာပနျခြီကားကို ဘယျဘကျခပျစောငျးစောငျး အနအေထားမှကွညျ့ပါက သူမရငျဘတျနားတှငျ မိခြောငျးပါးစပျပုံကိုလညျး တှရေ့မညျဖွဈပါသညျ။
အထူးခွားဆုံးအနဖွေငျ့ ထိုအနအေထားတှငျ သူမ၏မကျြနှာကိုကွညျ့လိုကျပါက အဖွကေို ရှာဖှဖေျောထုတျနိုငျရနျ အလှနျနီးကပျနသေညျ့အတှကျ အားပေးသညျ့အလား အစှမျးကုနျပွုံးပွနသေော မိုနာလီဇာအား တှမွေ့ငျရမညျဖွဈပါကွောငျး…….
အခြုပျအားဖွငျ့ Louvre Museum ထဲက Mona Lisa နှငျ့ The Last Supper ပနျခြီကားကွားမှာ ဘယျလိုဆကျစပျမှုတှရှေိနတောလဲ?
သူမ မကျြလုံးထဲက နံပါတျတှေ စာလုံးတှဟော ဘယျလိုအဓိပ်ပာယျဆောငျနေ သလဲ?
ပနျခြီကားထဲက ပနျခြီတှဖွေဈတဲ့ နောကျခံရှုမြျောခငျး တညျနရောတှနေဲ့ သတ်တဝါတှကေကော ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့ ထညျ့သှငျးရေးဆှဲခဲ့တာလဲ?
ဆိုတာတှကေတော့ နောကျနှဈရာပေါငျးမြားစှာအထိ ပဟဠေိတဈခုအဖွဈ ကနျြရှိနဦေးမှာဖွဈပွီး Leonardo di ser Piero da Vinci မှလှဲ၍ နောငျလာနောကျသားမြားအတှကျ မဖွရှေငျးနိုငျသော Da Vinci Code တဈခုအနနေဲ့ ဆကျလကျကနျြရှိနဦေးမှာ ဖွဈပါကွောငျး…….
Translated by DrAung
Posted in Amazing, KnowledgeTagged amazing, world knowledge
Previous post ကားတွေမလိုတဲ့ ကမ္ဘာ့စိတ်ဝင်စားဖွယ် နေရာလေးများ
Next post အိပ်ယာပေါ်မှာ ရှဉ့်ပေါက်လေးကို တွေ့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်